Heineken dia mandefa fonosana vaovao miaraka amin'ny loko sy fanovana maro | Famoronana an-tserasera
Fonosana Heineken vaovao hametrahana ny naoty amin'ireo singa mampiavaka azy indrindra
Izay lehibe kokoa ny lanjan'ny sary hita tany Heineken ankehitriny dia nohamafisina tamin'ny fonosana vaovao iray amin'ireo marika labiera fanta-daza indrindra eto an-tany.
Io maitso manaitra ary miaraka a tena velona ny feo mihazona ary mifehy fonosana vaovao izay tian'izy ireo homena laza lehibe kokoa amin'ny labiera efa manana izany.
Labiera holandey Heineken namoaka fonosana vaovao izay hanomezana lanja kokoa ny zavatra nanan-danja lalandava. Ity kintana mena ity dia mandray ampahany lehibe amin'ny famolavolana ka ny typeface dia iray amin'ireo lanjany lehibe indrindra amin'ny fahitana.
Ankehitriny ianao dia ho afaka hanazava haingana ny fahasamihafana rehefa mankany amin'ny fivarotana lehibe ianao ary mitady Heineken miaraka amin'ireo kalesy feno loko ireo ary samy hafa ny hazavany noho ny fotsy ny fenitra amin'ny maintso sy 0.0 ho an'io loko manga io.
Ary tsy miresaka momba ny orinasa mikatso taloha akory isika. Nanana foana izany fahaizana sy fahaizana manavao izany ary mijanona ho vaovao hatrany momba ny famolavolana. Ary bebe kokoa noho izany amin'izao fotoana manokana iainantsika ny digital izao izay nisy teo amin'ny fiainantsika na tamin'ny manodidina antsika.
Ity fanovana ity dia natolotry ny maso ivoho VBAT ary efa tamin'ny 2016 no tompon'andraikitra hanavao ny sary Heineken. Izahay dia manamarika an'io kintana mena goavambe io ho mpiorina amin'ny fonosana vaovao sy ilay typeface izay mahazo habe ihany koa, ary hipetraka amin'ny ankamaroan'ny toerana ao anatin'ireny fitoeram-bokatra ireny izay hisy hovitrovitra bebe kokoa sy misy.
Famolavolana endrika hafa toa ilay naka IKEA, na izany aza tsy dia atahorana loatra amin'ny logo anao. Fotoana tsara hamelomana indray ireo marika sy hanavaozana azy ireo amin'ny andro nilalaovany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Fonosana Heineken vaovao hametrahana ny naoty amin'ireo singa mampiavaka azy indrindra
Ahoana ny fomba hisafidianana paleta miloko mety amin'ny marikao
Mamorona sary Pinterest ho an'ny marikao miavaka